Pakistan tour of Zimbabwe, 2015 Cricket News, Articles, Blogs
Cricket News sort by Pakistan tour of Zimbabwe, 2015
2nd ODI: Chibhabha and Chigumbura helped Zimbabwe post 276
Published on :Oct 03, 2015 11:33
Chibhabha (90) and Chigumbura (67) helped Zimbabwe post 276 runs for Pakistan. Pakistan tour of Zimbabwe 2015, 2nd ODI: Zimbabwe vs Pakistan at Harare, Oct 3, 2015.
Tags: Pakistan tour of Zimbabwe, 2015, Zimbabwe vs Pakistan 2nd ODI at Harare, Oct 03, 2015, live news
2nd ODI preview: Pakistan, Zimbabwe seek batting improvements
Published on :Oct 02, 2015 09:10
ZIM vs PAK 2nd ODI Live Score, Preview: Be it T20s or the first T20, the Zimbabwe-Pakistan series has followed a rather repetitive pattern.
Tags: Pakistan tour of Zimbabwe, 2015, Zimbabwe vs Pakistan 1st ODI at Harare, Oct 01, 2015, Zimbabwe, Pakistan
ZIM v PAK 1st ODI: Pakistan spin trio clean up Zimbabwe
Published on :Oct 01, 2015 14:42
Pakistan cruised to a 131-run win over Zimbabwe in the first one-day international at Harare Sports Club.
Tags: Pakistan tour of Zimbabwe, 2015, Zimbabwe vs Pakistan 1st ODI at Harare, Oct 01, 2015, Pakistan, Zimbabwe, live news
Preview: Pakistan look to continue Zimbabwe domination in ODIs
Published on :Sep 30, 2015 12:26
Having comfortably defeated Zimbabwe in the two T20 matches, Pakistan would now be keen to extend their domination in the one-dayers as well. Zimbabwe had visited Pakistan for a short series some months back,
Tags: Pakistan tour of Zimbabwe, 2015, Pakistan, Zimbabwe